Dawlada UK oo bixinaysa mushaaraadka qayb ka ah Ciidanka Xoogga Dalka – STAR FM SOMALIA
aliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, S/Gaas Maxamed Aadan Axmed, ayaa kulan kula yeeshay Xarunta Safaaradda Britain ee Magaalada Muqdisho Safiirka u fadhiya Somaliya, haweeneyda Harriett Mathews. Waxaana ay ka wada hadleen taageerada ay Boqortooyada Britain siiso Ciidanka Xoogga Dalka, waxayna ay isku afgarteen in la kordhiyo tirada iyo taakuleynta ay siiyaan Ciidanka Xoogga dalka.
Safiiradda, ayaa ballanqaaday inay bixinayaan mushaaraadka CiidankaXoogga, gaar ahaan qaybta 60aad, iyadoona sidoo kale sheegtay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska Xeryaha Ciidanka, si loo xoojiyo tayada iyo tababaradooda.
Dhanka kale Harriett Mathews waxay ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay weerarkii Hotel Saxafi, waxayna u rajeysay inta dhaawaca ahna in ay ka soo kabtaan.
Taliyaha Ciidanka Xoogga, S/Gaas Maxamed Aadan Axmed ayaa uga mahadceliyey Safiirka iyo Dawladda Britain taageerada ay siinayso dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadaallada dib-u-dhiska dalka.
“Waxaan Safiirka isku afgaranay sidii ay Britain u xoojin lahayd taageerada ay siiso Ciidanka Xoogga Dalka. Waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadka ay sameysay anigoo rajeynaya in uu hirgeli doono xiliyada dhow ee soo socda.” Ayuu yiri Taliyuhu.
S/Gaas Maxamed Aadan Axmed, ayaa wuxuu dadaal badan uu ku bixinayaa, xoojinta dib u dhiska Ciidamada Qalabka Sida.